Sinto-mahery 67 Ha Manao fitafiana madio ireo mpangarona finday
Tovolahy iray, 20 taona manao fitafiana madio no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny CSP7 67ha ny 3 oktobra teo
tamin’ny 7 ora hariva teny amin’ny fiantsonan’ny taksibe Vatobe 67ha tamina resaka harom-paosy. Mpirahalahy niandry taksibe handeha hamonjy fodiana eny Ivato no lasibatra tamin’izany. Nandritra ny fisisihana hiditra tao anaty fiara no nanaraotan’ilay mpanao ratsy naka ny findain’ilay tovolahy tao am-paosiny. Noho ny fisisihana be loatra, tsy niara tafiditra izy ireo fa ny zandriny no lasa aloha, akory anefa ny hatairan’ilay zokiny raha nahita ny lehilahy iray nitondra ny findain’ ny zandriny ary nanisika izany tany am-paosiny. Narahin’ilay zokiny lahy ity tovolahy nitondra ilay finday vao avy nangalarina ka rehefa nahita polisy izy dia niantso vonjy. Nenjehina avy hatrany ity tovolahy ity ka rehefa nosavaina ny paosiny dia hita tao ilay finday avo lenta “galaxy samsung S4 mini”. Rehefa natao ny famotorana dia niaiky ny asa ratsy nataony ity farany. Mirongatra ny asa ratsy amin’iny faritra 67ha sy Andravoahangy iny ankehitriny. Miandry hetsika na “operation” matanjaka izany, mila hamafisina ireo mpitandro filaminana amin’ireo faritra ireo.